Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe Yomlando - Le Louisbourg - I-Airbnb
Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe Yomlando - Le Louisbourg
Indlu encane ibungazwe ngu-Brad
Izindlu ezakhiwe ngamapulangwe ezise-Hammond Hill Desert resort zikusiza ukuthi ubuyele emuva ngesikhathi. Lezi zindlu ezakhiwe ngamapulangwe ezingamafidi-skwele angu-80 zinakho konke okudingayo ukuze uhlale ngokunethezeka, okuhlanganisa umbhede, itafula elincane, isihlalo, nokuhlobisa kwasemaphandleni nomlando. Ngokuhambisana novulande unomuzwa wokuthi akukho amandla noma amanzi empompi endlini eyakhiwe ngamapulangwe.
Indawo ngayinye eyakhiwe ngamapulangwe iza nendawo yetende, ngakho abantu abangu-4 bangalala ngokunethezeka kule sayithi, 2 endlini eyakhiwe ngamapulangwe bese esele etendeni.
Indawo ngayinye eyakhiwe ngamapulangwe inompheme wangasese, i-firepit, indawo yokuhlala, kanye ne-pad yetende. Okunye okufakiwe yisikhwama esiyi-1 sokhuni, futhi esengeziwe siyatholakala ukuze sithengwe.
Le ndlu eyakhiwe ngamapulangwe itholakala e-Hammond Hill eco-resort, enamasevisi engeziwe amaningana.
Izindlu ezakhiwe ngamapulangwe ezise-Hammond Hill Desert resort zikusiza ukuthi ubuyele emuva ngesikhathi. Lezi zindlu ezakhiwe ngamapulangwe ezingamafidi-skwele angu-80 zinakho konke okudingayo ukuze uhlale ngokunethezeka e-Hammond Hill. Indlu ngayinye eyakhiwe ngamapulangwe iza nombhede, itafula eliseceleni kombhede, isihlalo, nokuhlobisa kwasemaphandleni nomlando ukukusiza ukuthi uzwe isikhathi esithile sendlu yakho eyakhiwe ngamapulangwe. Indawo ngayinye ihlanganisa umpheme wakho wangasese, umgodi womlilo, indawo yokuhlala yangaphandle, kanye ne-pad eyengeziwe yetende. Hlala endlini eyakhiwe ngamapulangwe, futhi wenze izingane zakho noma abangane bahlale etendeni, noma ngokuphambene nalokho! Esikhathini sasebusika, lezi zindlu ezakhiwe ngamapulangwe zizohlanganisa i-heater encane. Isayithi ngayinye iphinde ibe nesikhwama esiyi-1 sokhuni, kanye nezinkuni ezengeziwe kanye namalahle endaweni evamile yokosa kuyatholakala ukuze kuthengwe. Qaphela ukuthi izindlu zokugezela ezivamile ziseduze nendawo yokupaka futhi azikho endlini eyakhiwe ngamapulangwe.
Le ndlu eyakhiwe ngamapulangwe yi-Louisbourg, ebizwa ngokuthi futhi yalungiswa ngemva kokuhlala komlando wase-France e-Nova Scotia